के चीनमा नरसंहार भइरहेको छ ?, यस्तो छ अभियन्ताको भनाई - samayapost.com
समयपोष्ट २०७७ मंसिर १८ गते ९:११
मोन्ट्रियल, क्यानाडा. चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङ्का मुस्लिमहरुलाई परिवर्तन गर्नाका लागि पुनर्शिक्षण शिविरहरूको ब्यापक प्रयोग गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार सम्बन्धि कमिटीले २०१८ मा गरेको अनुसन्धानमा चीनले दशलाखभन्दा बढीलाई बन्दी बनाएर यस्ता शिबिरहरुमा राखेको खुलासा गरेको थियो भने अहिले स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले उक्त संख्या १७ लाख नाघिसकेको बताएका छन्।
अधिकारबादी संस्थाहरुले चीनले व्यापक रुपमा मानवअधिकार उलंघन गर्दै दाह्री पाल्न, उइगुरहरुका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने, धार्मिक मान्यता अनुसार मात्रै विवाह गर्न नहुने, सार्वजनिक स्थलमा बुर्का -अनुहार ढाक्ने गरी वस्त्र लगाउन नपाइने, परिवार नियोजनका नीतिहरु पालना गर्नुपर्ने लगायत ब्यबस्था गरिएको छ। पुनर्शिक्षण शिविरहरू संचालन गरी टर्कीश मूलका उइगुर मुसलमानहरुलाई परिवर्तन गराउने प्रयत्न गरिएको छ। सिन्जियाङ्मा हान जातिका चिनियाहरुको ब्यापक बसाईसाराई गराई उइगुरहरुलाई उल्पमतमा समेत पारिएको छ।
अब्दुवेली आयुप उइघुर अभियान्ता तथा भाषाविद हुन् । उनले चिनिया सरकारले उइगुर जाति, भाषा, संस्कृतिमाथि दमन गरिरहेको भज्दै आवाज उठाउदै आएका छन् । उइगुर शिक्षाका लागि बालसदनहरु संचालन गर्दै आइरहेका उनलाई उइगुर जातिमाथी चिनिया सरकारले जातिय नरसंहार गरेको आरोप लगाएको भन्दै चिनीयाँ सरकारले जेल सजाय सुनाएको थियो ।
द पोष्ट मिलेनिएल (टिपीएम) : तपाईलाई उइगुर भाषा शिक्षाका लागी के ले उत्प्रेरणा गर्यो ?
सन् १९९२ मा उरुम्की आउनु अघि म कश्गरमा हुर्किए, त्यहाँ उइगुर बालसदनहरु थिए । तर, १० बर्ष पछि त्यहाँका बालसदनहरु हटाइए । बालसदनहरु हटाइएको देख्दा मलाई धेरै दुखित बनायो । आफ्नो भाषा र संस्कृति संकटमा देख्दा यसलाइ जोगाउनका लागि कदम लिनुपर्ने महसुस भयो । आफ्नो भाषा शिक्षा भयो भने आउने पुस्तासम्म भाषा निरन्तर रहन्छ । भाषाको शिक्षा भएन भने यो लोप हुन्छ ।
मैले एउटा चिनियाँ टेलिभिजनको टेलिफिल्मा कश्गरको महिमालाई चित्रण गर्न खोजेको देखेँ । चिनिया सरकारले पर्यटन आकर्षण गर्न उइघुरहरुको संस्कृति र कला जोगाएको चित्रण गरिएको रहेछ, यो सत्य होइन ।
टिपीएमः तपाइलाई भाषले कसरी संस्कृति कायम राख्छ भन्ने लाग्छ ?
टिपीएमः क्यानडा सरकारले चिनियाँ सरकारको उइगुर बिरुद्धको नीतिलाइ उइघुर संस्कृति र धर्म लोप गराउने प्रयास मात्र नभएर नरसंहारका साथै यसलाइ दोश्रो विश्वयुद्धमा नाजीले यहुदीहरुलाई नरसंहार गरेको ब्यबहारसँग तुलना गरेको छ, यो ठिक भनाइ हो ?
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पुरानो शहर भन्दै सजाएर चित्रण गर्ने गरेका छन् । तर, दुखको कुरा त्यहाँका मौलिक बासिन्दाहरु हराइरहेका छन् । बाटोहरु खाली देखिन्छन् ।
टिपीएमः तपाईले कश्गरमा अध्यापन गर्दा तपाई र सरकारी अधिकारीहरुले कस्तो महसुस गरेका थिए ?
आयुपः कश्गर उइगुर संस्कृतिको मुटु हो । त्यहाँ हामीले ४ हजार ५ सय पीडितहरुको कथालाई रेकर्ड गरेका छौँ। कोही हराएका/बेपत्ता पारिएका छन्, बन्दी बनाइएका छन् । कश्गर पुरानो शहर भएकाले चिनियाँ फिल्म र सिनेमाका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
टिपीएमः उसो भए चीनले गरेका सबै गलत प्रचार प्रसार हो ?
टिपीएमः तपाइँको बालसदन कस्तो किसिमको थियो ?
आयुपः हाम्रो शिक्षकहरु चिनीयाँ प्रान्तमा पढेका थिए । उनीहरु चिनीयाँ राष्ट्रिय भाषा र अंग्रेजी दुबै बोल्थे । हाम्रा बालबालिकालाइ उइगुर प्रमुख भाषा, साथै चिनीयाँ राष्ट्रिय भाषा र अंग्रेजी भाषा जान्नुपर्छ भन्ने जोड थियो । हामी हाम्रो बालबालिका लाइ खेलकुद, कार्टुन, थिएटरको माध्यमबाट सिकाइ गर्छौ, किनकी बालबालिकाले रमाइलोसंग सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । thepostmillennial.com